အရက် ဘီယာ သောက်တတ်သူများ အတွက် သက်တမ်းစေ့ သောက်နည်း
အရက်ကို သက်တမ်းစေ့ သောက်နည်း။ မန်ကျည်းသီး လက်တစ်ဆုပ် အပြည့်၊ ထန်းညက်လေးလုံးခန့်၊ ဆားသင့်တင့်ရုံနဲ့ ရေနွေးဆူဆူထည့် မနက်ကတည်းက နှပ်ထား။ ဘယ်လောက်ပဲ သောက်လာလာ ညအိမ်ပြန်ရောက်ရင် အဲဒါလေး တစ်ခွက်သောက်ပြီးမှ အိပ်။ အသည်းနား တစ်ဝိုက်က အောင့်တာတွေ၊ ရှက်တာဘီရုပ် ပေါက်လာတာတွေအတွက် ဓာတ်စာလေး ကြိုကာကွယ်ကြတာပေါ့။
စနစ္​တက်နဲ႔ လုပ္​ပိုင္​ခြင္​့​ေပးလိုက္​ရင္​ ကမာၻ​ေက်ာ္​ႏိုင္​မယ္​့ ျပည္​တြင္​း ႐ိုးရာယာမကာမ်ား
Kwee Zaw September 10, 201900
အရက္ေတြ အခြန္ေလွ်ာ့ေကာက္ဖို႔ အခြန္ေလ်ာ့ ေကာက္မွ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ဟာ သြင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းအရက္ ေသာက္ျပီး ေခါင္းၾကည္မယ္ အေၾကာင္းလြတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတာဖတ္လိုက္ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားအရက္ေတြ သြင္းမွမဟုတ္ပါဘူး ျပည္တြင္းျဖစ္ ဆန္(ဆန္ကြဲ)နဲ႔ ခ်က္တဲ့အရက္၊ ေကာက္ညွင္းနဲ႔ခ်က္တဲ့အရက္၊ထန္းလွ်က္နဲ႔ ခ်က္တဲ့အရက္ေတြ၊ေျပာင္းေကာက္(ႏွံစားေျပာင္း)နဲ႔ခ်က္တဲ့ ရွိပါတယ္။အဲဒီအရက္ေတြကို ေက်းရြာေတြတပိုင္တႏိုင္ခ်က္တာပါ။တိုင္းရင္းသားေတြခ်က္ပါတယ္။အရည္အေသြးကလည္းမီးေတာင္ေတာက္တယ္။ရန္ကုန္ ဘီအီးေတြ၊ေဖာေရွာေသာက္တဲ့လူေတြနဲ႔ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္ေတြ ေသာက္တာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။(အရည္အေသြးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေျပာတာပါ) ေနာက္ထန္းလွ်က္ကို အရက္ခ်က္တာ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္ျဖစ္သြားတာပါ။ဆန္ကြဲကို အရက္ခ်က္တာ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္…
စက်တင်ဘာဖွားတွေရဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်နဲ့ သူမတူတဲ့ အရည်အသွေး (၁၀) ခု
Thazin Media September 6, 201900
စကျတငျဘာဖှားလေးတှဟော စကားပွောလို့အရမျးကောငျးတဲ့သူတှပေါ။ စကားပွောရတာလညျးအဆငျပွသေလို အနအေထိုငျအပွောအဆိုလေးတှကေလညျး ကွှလေောကျစရာပါ။ နောကျထပျ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတို့ရဲ့ မှေေးရာပါအားသာခကြျနဲ့ သူမတူတဲ့ အရညျအသှေးတှကေိုဖောျပွပေးလိုကျပါတယျ။ (၁) စက်တင်ဘာဖွားတွေဟာ အရမ်းကိုယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေပါ။ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားတွေကိုလုံးဝမပြောတဲ့အပြင် လေးစားမှု၊ ရိုသေမှုအပြည့်ရှိတဲ့သူတွေပါ။ (၂) စက်တင်ဘာဖွားတွေဟာ အမှန်တရားကိုပဲ ပြောတဲ့သူတွေပါ။ အလိမ်အညာတွေကိုလုံးဝမပြောပဲ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ (၃) စက်တင်ဘာဖွားတွေဟာ အရမ်းချစ်တတ်တဲ့သူတွေပါ။ လူတွေကိုသာမက တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ၊…
အပြင်ပန်းမှာ ပြုံးရယ်နေပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ မပျော်ဘူးဆိုတာ ဒီအတွေး (၇)မျိုးကြောင့်ပါ
Thazin Media September 5, 201900
လူတော်တော်များများက စိတ်ချမ်းသာစရာထက်၊ စိတ်ညစ်စရာကို ပိုခံယူတတ်ကြပြီး လူရှေ့မှာ ရယ်နေရင်တောင် တကယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ မပျော်နိုင်တာမျိုးဖြစ်နေကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေထက် သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပိုပြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ စိတ်ထဲက ဒီခံစားချက်(၇)မျိုးက သူမပျော်နိုင်အောင် တားဆီးနေတာပါ။ (၁) အောင်မြင်မှုကို တစ်ချိန်လုံးတွေးနေတာ ဘဝမှာ ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့၊ အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို တစ်ချိန်လုံးတွေးပြီး ကိုယ်ကြိုးစားသမျှ အရာမထင်လာမှာကို စိုးရိမ်နေတာမျိုး၊…
Kwee Zaw September 3, 201900
“အမေ သား မနက်ဖြန် ဘွဲ့ယူရမှာနော်…” “အမေ သိပါတယ်သားရယ်… အဲ့ဒါကြောင့် လမ်းထိပ်က ဒေါ်ကျော့ ဆီမှာတောင် အမေ အင်္ကျီ ၤအပ်ထားပါသေးတယ်…အမေ့မှာ အင်္ကျီ အသစ်မရှိတော့ဘူးလေ…” “ဟင်..အမေ ကလိုက်မလို့လား… အိမ်မှာ အဖေ့ကိုစောင့်ဖို့လူမရှိဘဲဖြစ်မှာပေ့ါ…. ” ” သားအဖေက သက်သာနေပါပြီသားရယ်… ဝှီးချဲ လေးနဲ့ခေါ်သွားရင်ရပါတယ်….” သား ဖြစ်သူစိတ် ညစ်သွားတယ်… ဒီလိုပွဲမျိုးကိုသူ့မိဘတွေကို မခေါ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး…….
ကိုက်လန် ၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး များ
Thazin Media September 3, 201900
အစာခြေ လမ်းကြောင်း စနစ်ကို ကျန်းမာစေပါတယ် ကိုက်လန် မှာ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းပါးပြီး အဆီဓာတ်လည်း လုံးဝမပါပါဘူး။ အမျှင်ဓာတ် များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုက်လန်တစ်ခွက်မှာ ၃၆ ကယ်လိုရီ နဲ့ အမျှင်ဓာတ် ငါးဂရမ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ အထွေထွေ ကျန်းမာရေး ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ် ကိုက်လန် မှာ သံဓာတ် များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။…
ညနက်တဲ့အထိ အိပ်ယာထဲအထိ ဖုန်းသုံးခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
Thazin Media September 2, 201900
ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူချိန်ဟာ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၃ နာရီအတွင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှင်များအားလုံးနီးကလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၁၁-၃ အတွင်း အနားမယူပဲ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းမဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဆိုးဝါးလာစေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဓိကအရေးကြီးဆုံး အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ အသည်းဟာ ၁၁-၃…
မင်းတုန်းမင်း မှီဝဲခဲ့တဲ့ ဆေးနည်း
Kwee Zaw September 2, 201900
မင်းတုန်းမင်း က မယားငါး ရာ ယူထားတာတောင် ဘယ်လိုမျိုး အားအင်ပြည့် အစွမ်းထက်နေလဲ သိရပြီ။ (ပရန္နဝါပင်)အာယုဗ္ဗေဒဆေးပညာတွင် ရသာယနဆေးဘက်ပစ္စည်းအဖြစ် အဓိကအသုံးပြုသော အပင်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒယနိုင်ငံတွင် လေ့လာမှုအရ နွေရာသီမေလတွင် တူးဖော်သော ၃စင်တီမီတာ အချင်းရှိသည့် ဆေးမြစ်သည် အသဲကို ကောင်းစွာကာကွယ်ပေးနိုင်သော အာနိသင်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အိန္ဒယနိုင်ငံတွင် နှလုံးအားတိုးဆေး၊ အသဲဆေး၊ ဆီးဆေး၊ အသက်ရှည်နုပျိုဆေးအဖြစ် သုံးစွဲကြပါသည်။…
Kwee Zaw September 1, 201900
သက္ကရာဇ် ၁၀၇၆-ခုနှစ်တော်သလင်းလပြည့်ကျော်(၁)ရက် သောကြာနေ့ ညဉ့် တစ်ချက်တီးကျော် ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ် မွန်းတည့်မတ်ချိန်တွင် ခမည်းတော် မင်းညိုစံနှင့် မယ်တော်မဟာဒေဝီ စောညိမ်းဦးတို့မှ ဖွားမြင်သည်။ ပျိုရွယ်စဉ်က သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် လက်ရုံးတော်မှ မီးတောက်ခဲ့သည်။ ၁၁၁၃-ခုနှစ် မွန်တို့လက်ချက် ဖြင့် အင်းဝပြည်ကြီး ပျက်စီးသောအခါ ဇာတိ မုဆိုးဘိုရွာမှ နေပြီး မွန်တို့ရန်ကို တွန်းလှန်ကာ မြို့တည်၍ ၁၁၁၄-ခုနှစ်တွင် မင်းပြုသည်။ ဘုန်းကြီးသောမင်းယောကျ်ားဖြစ်သည့်အပြင်…
အထီးကျန်ဆန်လွန်းတဲ့သူတွေဟာ ဟာသတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်တတ်ကြတယ်
Kwee Zaw August 28, 201900
သင့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်က အမြဲတမ်း ရယ်မောနေတတ်တဲ့သူတွေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်းရယ်နေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်လွန်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်းရယ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ စကားအရမ်းများတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် သူများတွေထက်ပိုပြီး ဖေးမဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သတိရပါနော်။ (၁) စကားပြောဖော်မရှိဘူး အမြဲတမ်းရယ်မောနေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ လက်တွေ့ဘဝမှာ စကားပြောဖော်မရှိလောက်အောင်ကို အထီးကျန်ဆန်တဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ဘဝမှာ အမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေလေ့ရှိပြီး သူငယ်ချင်းဆိုတာတောင် ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ သူများနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ…